Wararkii ugu dambeeyey magacaabistii golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo... - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey magacaabistii golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo…
Wararkii ugu dambeeyey magacaabistii golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo…
Baydhabo (Caasimada Online) – Waxaa maanta la filayey inuu Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiikh uu isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirad.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in Dib u dhac uu ku yimid Isku-shaandheyn lagu sameyn rabay Golaha Wasiirada Ee Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaaliya.
Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Koofur Galbeed ayaa sheegay in ay dib u dhacday Magacaabista kadib Khilaaf ka dhashay Mas’uuliyiinta Maamulka oo ku aadan qaabka Magacaabista Wasiirada.
Maanta ayaa Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh aadan uu doonayay inuu Isku-shaandheyn ku sameeyo Golaha Wasiiradda Koofur Galbeed,waxaana Talaabadaas ka dhashay Khilaaf Sababay in isku-shaandheynta ay dib u dhacdo.
Illo ku dhow Dhow Madaxtooyada Koofur Galbeed ayaa Radio Kulmiye u sheegay in Beelaha Qaar ay ka biyo diideen Isku-shaandheynta kadib markii Madaxweyne Shariif Xasan uu yareeyay Tirada Wasiirada oo markii hore ahaa 64 Xubnood,balse hadda ka dhigay 24 Wasiir.
Beelaha ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan in ay waayaan Wasiiradii ay ku lahaayeen Maamul Goboleedka Koofur Galbeed,iyadoo sababtay in dib loo dhigo Isku-shaandheynta.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa muddo badan qorsheenayey inuu isku shaandheyn ku sameeyo golahiisa wasiirada, ilaa hadda si rasmi ah looma kala xaqiijin waxa hor taagan inay arrintaan dhacdo.